परिमार्जन गर्नुहोस् - रूपान्तरण - बहुभुज बनाउन (LibreOffice Draw only) रोज्नुहोस्
चयन गरिएको वस्तुको प्रसङ्ग मेनु खोल्नुहोस् र रूपान्तरण गर्नुहोस् - बहुभुज बनाउनरोज्नुहोस्
बहुभुजमा परिवर्तन गर्नुहोस्
बहुभुजमा बिट्म्याप छवि रूपान्तर गर्नका लागि तलका विकल्प आवश्यक छन्. रूपान्तर गरिएको छवि वास्तवमा रङबाट भरिएको सानो बहुभुजहरूको समूह हो ।
छविका लागि रूपान्तर विकल्प सेट गर्नुहोस् ।
रूपान्तर गरिएको छविमा प्रदर्शन गर्नका लागि रङहरूको सङ्ख्या प्रविष्ट गर्नुहोस्. LibreOffice ले छविमा प्रत्येक रङको संयोगका लागि बहुभुज निर्माण गर्दछ.
रङ बहुभुजहरू हटाउनुहोस् जुन तपाईँले प्रविष्ट गर्नु भएको पिक्सेल मान भन्दा सानो छ
रङको खाली भागहरू भर्नुहोस् जुन बिन्दु न्यूनिकरण लागू गरिएको थियो .
पृष्ठभूमि भर्नका लागि आयतको साइज प्रविष्ट गर्नुहोस्.
सक्कली छविको पूर्वदृश्य गर्नुहोस् ।
भेक्टराइज गरिएको छवि:
रूपान्तर गरिएको छविको पूर्वदृश्य. क्लिक पूर्वदृश्य भेक्टराइज गरिएको छवि उत्पादन गर्नका लागि
रूपान्तर प्रगति प्रदर्शन गर्नुहोस् ।
परिवर्तनहरू लागू नगरिकन नै रूपान्तर गरिएको छविको पूर्वदृश्य हेर्नुहोस्
Title is: बहुभुजलाई